Cyprus oo lagu badbaadinayo $13 bilyan - BBC Somali - Ganacsi
Cyprus oo lagu badbaadinayo $13 bilyan
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Maarso, 2013, 20:11 GMT 23:11 SGA
Dad badan ayaa saf u galay in bangiga ay lacagtooda kala soo baxaan.
Dadka reer Cyprus, ayaa aad uga carooday kadib markii Midowga Yurub uu ku heshiiyay barnaamish 13 bilyan oo dollar oo lagu badbaadinayo dhaqaalaha lagu xiray sharuud in dadka bangiyada lacagta u taala ay wax ka bixiyaan qarashka 13 bilyan ee lagu badbaadinayo waddanka.
Dad badan ayaa lacagtoodii maanta bangiga kala baxay. Maanta bangiga kaliya ee furnaa ayaa isla markiiba la xiray si loo joojiyo dadka faraha badan ee lacagta kala baxaya bangiga.
Madaxda Midowga Yurub, ayaa aaminsan in lacagta bangiyada Cyprus taal badankooda ay leeyihiin dad Ruushka u dhashay oo lacag aan sharci ahayn bangiga dhigtay.